saharasandes, Author at शेयर गर्नुहोस - Page2of 59
बुढी म आउदै छु भनेर मलेसियाबाट फोन गरि घर आउँदा श्रीमती अर्कै सँग टाप
दीपा दीपकमाथी जाइलागीन् नायिका पूजना पनि, ‘२–४ वटा फिल्म चल्यो भन्दैमा राजेश हमालसँग तुलना गर्ने ?
सार्वजनिक सवारी सञ्चालन गर्न दिने सरकारको निर्णय, भाडा भने महंगिने
संसद सचिवालयद्वारा सरिता गिरी पदमुक्त बनेको सूचना जारी, गिरीको सांसद पद चट
आमालाई बचाईदिनुहोस सके सहयोग गर्नुहोस नसके १ सेयर गर्दिनुहोस
खुसीको कुरा: अब पुलिसमा होचा पुडकाले पनि जागिर पाउने
बिदेशमा रहेका दिदिबहिनी लाई नराम्रो भन्नेलाई दिए ई युवाले एस्तो चे’ता’वनी भिडियो सहित
क्वारन्टीनमा नाचेर भाइरल बनेका प्रहरी जवान हेर्नुहोस यो भिडियो
कि कोरिया जान दे’, कि रोजगारी दे, भन्दै माइतीघरमा प्रदर्शन
नेपाल यो अवस्थामा हुदाँ राजिनामा माग्ने सबै राष्ट्र-घाती हुन -ओली
यस कारण एमसिसी अस्विकार गर्ने प्रचण्डकाे घाेषणा पूरा हेर्नुहोस
हाम्रो युट्युब च्यानल
जनचेतनाका लागी समाचार
यिनै हुन २ घण्टा मात्र सुतेर कोरोना भाइरसको औषधि बनाउने महिला: कसरी सम्भव भयो हेर्नुहोस
लकडाउनमा नेपाल आउनेको संख्या भन्दा बाहिरिने को संख्या बढी
आज श्रावण १५ अर्थात खिर खाने दिन: यो सुभ दिनको राशी हेर्नुहोस
भारतलाई केपि ओलिको चेतावनी: सिमाका भारतीय सेना भगाएरै छोड्ने (पूरा पढ्नुहोस)
५ दिनका लागि सबै विद्यालय बन्द…
आस्था रावतलाई दीपक राज गिरिको कडा जवाफ, सबै नेपाली सकित: उनको स्टाटस अवस्य पढ्नुहोला
सासु–ससुरालाई राम्रो हेरचाह गर्ने बुहारी सम्मानित
रणवीर बने टुहुरो, यस्तो थियो बुवा ऋषिको अन्तिम इच्छा १/१ सेयर गर्नुहोस
खुसी हुँदै दिपकराज भन्छन मलाई महानायक बनाउनेहरूलाई धन्यवाद
नेपाल र चिनियाँ राष्ट्रपति बिच हुन लागेको सम्झौता
‘मुन्नी’आउनसाथ रोकिएकाे हाे त भद्रगाेल ?हेर्नुहोस मुख्य कारण
सरिता गिरी निष्कासित सांसद पद र साधारण सदस्य पनि नरहने
saharasandes3days ago
काठमाडौं । पार्टीको ह्वीप नमानेको भन्दै समाजवादी पार्टीले नेतृ सरिता गिरीलाई पार्टीबाट निष्कासन गरेको छ । मंगलबार बसेको समाजवादी पार्टीको बैठकले सरिता गिरीलाई पार्टीबाट निष्कासन गरेको हो । योसँगै, गिरी सांसद पदबाट पनि पदमुक्त भएकी छिन् । लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी समेटिएको नेपालको नक्सासहितको निसान छाप परिवर्तन गर्नका लागि भएको […]
भुटानी राजा भन्छन म नेपालको प्रसूति गृहमा जन्मेको हुँ मेरो घनिष्ट सम्बन्ध छ
saharasandes4days ago
काठमाडौँ । भुटानका राजा जिग्मे खेसर नाम्गेल वाङचुकले आफू नेपालमा जन्मेको बताएका छन् । भुटानका लागि गैर आवासीय राजदूत निलाम्बर आचार्यसँगको संक्षिप्त भेटमा राजा जिग्मेले आफू नेपालमा जन्मेको र नेपालीसँग आफ्नो भावनात्मक सम्बन्ध रहेको बताए । ‘नेपाल र नेपाली जनतासँग मेरो निकट सम्बन्ध छ । भावनात्मक सम्बन्ध छ । किनकी […]
कुलमान घिसिङका पिता कृपासिंह घिसिङकाे निधन
काठमाडौं । आज हामिले निकै कै दु:खद खबर प्राप्त गरेका छौ । यो खबर आज धेरै नै पीडा भएको छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङका पिता कृपासिंह घिसिङकाे ९६ वर्षको उमेरमा निधन भएको छ । उहाँको गएराति निधन भएकाे हो । स्वर्गीय घिसिङको स्वयम्भूस्थित आजै अन्त्येष्टि गरिने […]
चिनियाँ राजदूत फेरी भेटिन नेकपा नेता माधब नेपाललाई आखिर किन ? पूरा पढनुहोस
काठमाडौं । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) भित्र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको राजीनामाको माग गर्दै विवाद भइरहेका बेला चिनियाँ राजदूत फेरी सक्रिय भएकी छिन । नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत होउ यान्छीले नेकपाका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालसँग आइतबार साँझ भेट गरेकी छन । नेकपाको निर्णायक हुनसक्ने अनुमान गरिएको सोमबारको स्थायी […]
माधव नेपाल भन्छन: प्रचण्ड र मलाई जेल हाल्ने योजनामा छन ओलि
saharasandes5days ago
काठमाडौँ । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्ष केपी ओलीका विरुद्ध यतिबेला कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड), वरिष्ठ नेताद्वय झलनाथ खनाल र माधवकुमार नेपाल तथा उपाध्यक्ष वामदेव गौतम लगायतका नेता उभिएका छन् । स्थायी कमिटी बैठकमा उनीहरूले ओलीलाई अध्यक्ष र प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा दिन दबाब दिएपछि बैठक नै प्रभावित छ […]
टिकटकमा भिडियो बनाउदा, युवतीले कपडा खोलेपछी भाइरल (भिडियो सहित)
saharasandes6days ago
काठमाडौ । आजभोलि नेपाल लगाएत धेरै देश हरुमा टिकटको माहल बढेको छ । यो टिकटक मा भिडियो बनाउन धेरै नै सजिलो पनि छ र एस्मा एउटा भिडियो बनाएर पोस्ट गर्दा पनि अरुको वाल मा सिधै देखाउने भएकाले यो टिकटक छिटोभन्दा सबै प्रयोगकर्ता ले चलाउन सुरु गरेका हुन । यस्मा आँफुलाई […]
एमसीसी कुनैपनि तरिकाले पास गर्नुपर्छः अर्थमन्त्री खतिवडा
काठमाडौ । नेपाल सरकारले अमेरिकी सहायता परियोजना ‘मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन’ (एमसीसी कम्प्याक्ट) सम्झौता हाल ‘होल्ड’ मा रहेको जानकारी दातृ मुलुक संयुक्त राज्य अमेरिकालाई गराएको छ । उक्त सम्झौता संसद्मा अनुमोदनको समयावधि ९असार १६० मा अनुमोदन नभई गुज्रिएकाले अर्थ मन्त्रालयले एमसीएमार्फत् अमेरिकालाई पत्राचार गरी सो जानकारी गराएको हो । सो विषयमा […]
बाहिर भारतले हटाउन खोज्यो भन्ने भित्र बास्कोटाले लाइन मिलाउने ?
काठमाडौं । अहिले नेकपाभित्र विकसित घटनाहरुसँग पुराना सन्दर्भका तादात्म्यता पनि मिलेका छन् । जस्तो–केपी ओली पहिलो पटक माओवादी केन्द्रसँग सत्ता साझेदारीमा प्रधानमन्त्री बने, ०७२ असोजमा । संयोग कस्तो भने, त्यसबेला पनि केपी र प्रचण्डबीच आधा–आधा कार्यकालको सहमति थियो । तर, सहमति कार्यान्वयन भएन भन्दै माओवादीले कांग्रेससँग मिलेर सरकार ढाल्यो । […]
प्रचण्ड भारतीय एजेण्ट भएको खुलासा तेसै ले देशको हितमा काम गर्दैनन
काठमाडौँ । सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का अध्यक्ष पुष्प कमल दाहाल प्रचण्ड भारतीय एजेण्ट भएको उनकै अभिव्यक्तिबाट प्रष्ट भएको छ । नेकपा स्थायी कमिटीको बैठकमा बोल्दै अध्यक्ष प्रचण्डले प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष दुवै पदबाट केपी शर्मा ओलीले राजिनामा दिनुपर्ने माग गरेका थिए । बैठकमा बोल्दै अध्यक्ष प्रचण्डले प्रधानमन्त्रीबाट भारतले […]
आज लोकप्रिय नायिका स्वस्तिमा खडकाको जन्मदिन
काठमाडौं । लोकप्रिय नायिका स्वस्तिमा खड्काको आज जन्मदिन हो । विसं २०५२ मा जन्मिएकी स्वीसतमालाई जन्मदिनको शुभकामना रातीको १२ बजे नै उनका पति निश्चिल बस्नेतले दिएका छन् । निश्चलले स्वस्तिमालाई जन्मदिनको शुभकामना दिँदै सामाजिक संजालमा ‘ह्याप्पी बर्थडे बुढी भनेर लेखेका छन् । होस्टल रिर्टन्स, २ रुपैयाँ, छक्का पञ्जा २, नाई […]